Iidrones zoSetyenziso loLuntu oluSebenzayo, ifotografi kwimizuzu. -Geofumadas
Ikhaya/Okufumaneka/Drones ukusetyenziswa emkhosini Professional, photogrammetry kwimizuzu.
Ukwazi ukuba iiyunithi ezizimeleyo zisebenza njani namhlanje zisenza siyaneliseke ngokukwazi imvelaphi yezinto kodwa sisebenzise ngokunjalo intuthuko entsha.
Kwenzeka kuthi kuthi abo babezazi iindlela zesiko zokwenza iifoto, kunye nokusikelwa kwabo umda; xa umjikelo wokubamba, ukulungisa ingxaki, ukumodareyitha kunye nokuvelisa imveliso yokugqibela kuthathe iiveki, ukuba akunjalo kwiinyanga ngokuxhomekeke kwindawo yokugubungela. Kwakungenakwenzeka ukuyenza nangaliphi na ixesha lonyaka, ukuchaneka kwakulinganiselwe kwaye ngokuqinisekileyo iindleko ezinxulumene nazo zaziphezulu kakhulu.
Le mifanekiso kubonisiwe kweli nqaku, iihektare 100 lomgodi ziye zafakwa ngexesha imizuzu 30 entsimini, lo gama kumfanekiso kwesibini imizuzu nje 10 uyaziphakamisa, imveliso leyo ukuphehla ngaphandle ukusuka orthophoto, ezigoso inqanaba, imigca iprofayili, ukususela imodeli yesuntswana.
Nangona zininzi ezinye iindlela, sifuna ukuthatha ithuba lokwenza ubonakale umsebenzi wenkampani yaseSpain esele ithathele ingqalelo ngoku. Nantsi indawo yodliwanondlebe:
I-ATyges yinkampani yobunjineli eneendawo ezenziwa kwi-RPAS (iiprojekthi eziPhezulu zokuPhathwa kweeNqwelo), ezahluke kwimisebenzi yendabuko yeeprojekthi, ulawulo lokwakha nokusebenza kwamandla.
I-ATyges inikezela ngokubonelela ngenkonzo kunye nezixhobo zayo kwisigaba sokuqala senxaxheba zorhwebo, kunye nokuthengiswa kweenkqubo kumalungu esithathu, eyona njongo yokugqibela.
Ziziphi iimpawu zobugcisa ukuba i drone?
Sithanda ukwahlula i-drone njengenxalenye yenkqubo, kwaye hayi kakhulu njengemveliso uqobo. Sahlula phakathi "kwenxalenye ephaphazelayo", "indawo yokuziva" kunye "nesitishi somhlaba".
Inxalenye ehambahambayo ye-drone inomsebenzi wokuqinisekisa ukulawulwa kwendiza kunye nobunzima, bobabini abancediswa ngumqhubi kunye nokuzimela ngokucwangciswa kwesicwangciso sezindiza. Le nxalenye inomqolo wolawulo lwamandla kunye negesi kagesi kunye nomgca wekhompyutheni yokuhamba, ulawulo lwesistim kunye nomnxeba we-odiyo kwisitishi somhlaba.
Inxalenye Ukuzibona ubunjwe bedplate ibhodi isivamvo giroestabilización izilumle ukuma kwalo iingcamango ukubhabha kunye woluvo ngokwayo ukuba liqalise ukuba mission kwaye ibe spectrum ebonakalayo, spectrum infrared okanye ehleliyo multi / ecacicleyo, kuxhomekeke iiparameter ukuba ingafunyanwa.
Isikhululo somhlaba sineenkcukacha zomsakazo kunye nekhonkco yevidiyo ukulawulwa kweengxenye ezimbini zangaphambilini, ngoko unokulawula ukuhamba kunye neentloko okanye ukuzenzekela nje xa zihamba ngokuzenzekelayo.
Umthamo kunye autonomies izixhobo zixhomekeke umthwalo lwezeenqanawa yentlawulo kunye neemeko zokusingqongileyo, ukuba autonomies njengesiqhelo phakathi kwemizuzu 15-25 ngenxa boluvo eziqhelekileyo, ke, loo nto yinto ukuba wena ngokungqinelana neemfuno mission.
Umsebenzi osebenza kude kwi drone usebenza njani?
Kukho iindlela ezahlukeneyo:
Kwimo oluzenzekelayo, isicwangciso hambo okanye moya kwi PC kunye iibhakana, apho baya kwenza nabenzi boluvo uchukumise of a iqhosha kwi endle moya ngokuzimeleyo ukwenza isicwangciso moya echazwe lokuQala.
Kwimodi ye-semiautomatic, i-drone igcina isikhundla kunye nokuphakama kugxininiswe ngokuzimela, ukuvumela ukuba kugxininise ekusingathweni kweentloko. Nayiphi na intshukumo iya kulawulwa walawulwa ukusuka matshini, umbutho kufuneka enze moya yaye linoxanduva ukuqhuba ukubana endleleni ofunekayo, kungakhathaliseki ukuba umoya okanye eminye imiba iboniswe.
Umsebenzi ungenziwa kwi-PC okanye ithebhulethi ngokudityaniswa ngaphandle kwamacingo. Iiparameter eziphambili zeenqwelomoya zithunyelwa kwisikhululo somhlaba kunye nonomathotholo wolawulo ngamajelo amabini, ukuze kubekwe iliso kwindlela yokuziphatha kwedrone ngexesha lokwenyani.
Zonke iiparamitha zendiza zirekhodwa kwikhadi le-SD-mini kwi-drone yokuhlalutya kwakhona xa kuyimfuneko.
Ukuba umntu ufuna ukuthenga iyunithi, ziphi iimali ezidlulileyo ukusuka kwirekhodi ukuya kwisebe?
Ixesha lokuhambisa izixhobo ziiveki ezintandathu ukusuka ku-odolo lwalo, nangona ukuhanjiswa kuqhubeka ngexesha elifutshane kancinci. Ngelixa izixhobo zihlanganiswa kwaye zivavanywa, umxhasi uhamba ngamanqanaba ahlukeneyo enkqubo yoqeqesho lwabasebenzisi, apho ukongeza ekufundiseni ukuphathwa kwawo onke amacandelo enkqubo, bayalelwa ukuphatha ngesandla i-drone , njengenyathelo lokugqibela lokhuseleko kwimeko yokusilela koomatshini abazihambelayo okanye ukulahleka komqondiso weGPS ngezizathu zangaphandle.
Ukucinga ukuba utsalomali lwam luhamba ngekhulu lamamitha yodwa, lubangele i-vertigo.
Esona siqinisekiso senkqubo kukulula kokusebenzisa, kuba ukuba akukho manyathelo athathwayo, izixhobo zihlala zizinzile kubume nokuphakama emoyeni, ngaphandle kwezenzo zangaphandle zomoya, kwaye ngumqhubi ngokwakhe iyalela ukuba utshintshe okanye utshintshe indawo okuyo.
Nangona kunjalo, kunye lula ukusetyenziswa kobugcisa, ukhuseleko yinto efunekayo, iinkqubo ezingasafunekiyo ngoko iyaphunyezwa kwaye nokhuseleko oluzenzekelayo xa zokulahleka umqondiso, ukulahlekelwa kweemoto okanye idrophu iibhetri lawula izixhobo azo odwa ukuvelisa ukubuya kwakhe waxhuzula-off kunye kokwehla oluzenzekelayo.
Zonke iiparamitha ezibaluleke kakhulu ziqhubeka zihlolwe ngumqhubi kwi-LCD isibonakaliso somyalelo wokulawula ngokwawo, ukuvelisa izandi kunye nezilumkiso ezikhanyayo xa ufumanisa nayiphi na into engeyiyo.
Kukho iinkqubo ezithile zokujonga iisistim phambi kokuqala komsebenzi, kwaye ukuba ukuba i-anomaly ifunyenwe emhlabathini, inqanda ukuba izixhobo zingasebenzi.
Ukomelela koombane kunye neenkqubo zokulawula ezisetyenzisiweyo zinikeza isiqinisekiso esiphezulu sokuphumelela, kwaye kuze kube yimhla asizange sibe nengxaki yokubika ingxelo yendiza.
Izixhobo zethu ziqinisekisiwe emhlabeni xa kuthenganga ukukhutshwa ngenxa yephutha okanye ukungasebenzi kweyiphi na into.
Ziziphi iinkqubo ezinokunikezwa kwi-drone kwintsimi yoBunjineli boLuntu?
Ngenxa yobunjineli benkampani yethu kwintsimi yokwakha kunye nezobunjineli yilapho apho kugxininiswe ngakumbi kunye nokuphuhliswa kweenkqubo eziphambili.
Njengoko uqaphele inzuzo ephambili ukuba iinkqubo zethu zenzelwe ukuba ibe sisixhobo yabasebenzi zobugcisa le abaqhubi kwaye inkqubo yoqeqesho ilandelelanisiwe ukuba ibe sisixhobo elula abangabancedani ukuba ukuqokelelwa kwedatha hayi sisixhobo entsonkothileyo kokuba ukuba basingathe ngabasebenzi abakhethekileyo.
I-Drones isetyenziselwa ukuba:
ukujonga i-360º umfanekiso ophezulu kwaye,
ngokukodwa ukufumana i-topography ye-sky usebenzisa ubuchule be-photogrammetry.
Ngaloo ndlela unokufunda imisebenzi kwisigaba sokubhengeza, ukwenza izibalo zemilinganiselo kunye neendawo ezikuqokelelwayo, ulawulo lwezatifikethi, ukufundwa kwezilwanyana ezinjenge-slopes slippage kunye nokulandelelana.
Ezinye izicelo zobunjineli zizo ezivela kwingqesho kumacandelo afana namandla:
Ukulawula iipaki ze-photovoltaic, i-thermosolar kunye nomoya,
ukulawulwa kwamaziko oshishino,
ukubeka esweni i-hydroelectric, electrical,
ukulawulwa kokukhutshwa, ukuhlaziywa kwamagcena kunye nemigca yamandla,
Inkampani yethu ifuna ukunikela ngeemarike kungekhona imveliso engahlawuliyo, kodwa inkqubo efanelekileyo yokwakha: i ISICWANGCISO SENKQUBO, esayine isivumelwano sokusebenzisana neYunivesithi yaseJaen kunye neqela lophando "Iinkqubo zeFotogrammetric kunye neTopometric" ukuphucula umkhiqizo wokugqibela kwaye usanda kusayina isivumelwano kunye nenkampani yaseSwitzerland i-PIX4D ukubonelela ngeelayisenisi zesoftware zengcali PIX4D mapper Kunye needrones zethu; isoftware ethe ngqo yefoto yeplogrammetry yokufumana ii-orthomosaics, iimodeli zendlela yedijithali, amafu ekhomba kunye nolwazi olubuyiselwe ngaphandle kwi-CAD nakwi-GIS. Ngale ndlela, isangqa sokunika umxhasi isisombululo sokugqibela sivaliwe:
Iqela leDoneone + Ukucwangciswa kwendiza + isofthiwe yee-photogrammetric software
ATyges babefuna ukubeka ngokwayo kwiimarike obuvelayo UAVs njenge integrator, unika izisombululo epheleleyo kunye nobuchwepheshe gingci zakutshanje ixabiso efikelelekayo, iimpawu ezenza kube umehluko ngokucacileyo kwezinye amaqela kunye neenkampani.
Ekugqibeleni, enye inomdla.
Isiguquli sasimahla se-intanethi se-GIS-CAD kunye nedatha yeRaster
UJORGE WENGQESU uthi:
Sicela ikhowuti yesixhobo seDoneone + Ukucwangciswa kwendiza + isoftware yokuprogrammetric, ixesha lokuhambisa ... icandelo elisemthethweni. UMocoa putumayo eColombia ...
Sicela ikhowuti yesixhobo seDoneone + Ukucwangciswa kwendiza + isoftware yokuprogrammetric isoftware, ixesha lokuhambisa ... icandelo elisemthethweni.-Mocoa-putumayo -Colombia
yeison pallares uthi:
Sawubona, ndingathanda isicatshulwa sezixhobo kunye nesofthiwe, isiluleko esincinci malunga neengxenye ezongeziweyo ze-drone, iimpawu, ixesha lokunikezelwa kwezixhobo, iindleko kunye neengcebiso malunga nokusetyenziswa kwezixhobo, konke oku kwilizwe laseColombia, siyabonga kakhulu
Esteban Perez uthi:
Ndingayifumana njani i-drone kunye neyiphi intlawulo yayo, ndiyayifuna ukuba i-topography thesis, incedo kakhulu.
UGary Janco uthi:
Ndibuze ukuba ndicaphule i-imeyile yam: riga.metrix@gmail.com EBolivia Potosí
Yudith PP uthi:
Ndingathanda ixabiso le-drone, isofthiwe yee-cadastral survey ezihambelana ne-drone, uqeqesho lolawulo lwe-drone, uqeqesho lolawulo lwe-software.
Eduardo A Barrera uthi:
Ndicela iimpawu zezobugcisa (iinkcazo) kunye nexabiso leedronsi kwimisebenzi yezobugcisa, ukuba uthengise.
URuben Farias uthi:
Ndivela eChile kwaye ndiyakuthanda ukucaphula kwaye uthumele ulwazi olungakumbi
Ndingathanda ukufumana intengo ye-drone, ndifuna ngokukhawuleza ukuthenga, kuyacaphukisa ukuba kungabi nexabiso elikuyo xa kukho into efunekayo ngokukhawuleza. Ixabiso ngeedola, siyabonga.
Enrique Flores uthi:
Ndingathanda isicatshulwa sezixhobo zokuphanga iifowuni kunye neefoto, kunye nenkqubo yokusebenza kunye neenkqubo ezisebenzisa iidrones zakho.
Ndiyayixabisa ingqalelo yakho kunye nexesha.
UNGAFUNA UKUVUMELA I-QUOTE YE-TOPOGRAPHY WORK
maximiliano rodriguez uthi:
Ndiye ndibuze nceda uthumele quote 2 okanye imifuziselo 3 kunye iikhamera kunye software photogrammetry oko ukuba photogrammetry digital lwasemoyeni geo-ekhonjwe liphume ubume bendalo, ukuze bazisebenzise njenge uchwepheshe Surveys UMHLABA eChile.
Ndifuna ukwenza ulawulo lwenkqubela yomhlaba ngokusebenzisa i-drone ngokuhamba ngokuzimela kunye nesicwangciso sobhenketho kunye neefoto eziqingqiweyo, kunye neelona elincinci leekhilomitha ze-2, nceda ndithume i-quote. Ndiyabonga
UJairo Garcia uthi:
Ndiyakunomdla wokuthunyelwa ulwazi lweedrones kunye nenani lalowo ndivela eHonduras
UFranz Paniagua uthi:
Nceda ucatshulwa kwiNkqubo. EBolivia
Ukubulisa, beza kundithumela inani le-drom.
Raúl Nava uthi:
Ndinomdla wokufumana i-drone yezolimo, kodwa nokuba ne-Lidar iteknoloji, isofthiwe, i-georeferencing, njl. Ndikhoyo kwi-Mpuma-mpuma yeMexico, ngaba ungandixelela amanani?
JAVIER HURTADO uthi:
Ngomso mva ndifuna ukwazi malunga namaxabiso enkqonqqqqqqquthela ye-photogrammetry, ikakhulukazi i-cadastre, kodwa kunye nezinye izifundo, ezinokuthi zilungiswe izixhobo ze-lidar kunye nexabiso lezinto zonke (i-drone, ikhamera, i-lidar)
UYesu uEliya uthi:
Iván Méndez uthi:
Ukubulisa sifuna ukufumana i-drone ye-survey yepropati kunye nemisebenzi ye-cadastre yasezidolophini, nceda thumela uhlahlo lwabiwo lwe-drone kunye nezixhobo zakho ezipheleleyo (iikhamera kunye nesofthiwe ye-photogrammetric) Ndiyathemba impendulo yokubulela.
BRAYAN ARAZA ASTUDILLO uthi:
Ndifuna ukufumana i-drone, nceda thumela iingcaphuno kunye nemveliso eyahlukeneyo enkampani yakho.
u lonwabo uthi:
Molo, ndingumembi wezinto zakudala, ndinomdla kwilo drone… ndithumele iindleko zezixhobo, nceda
nceda qhagamshelana nombolo ebalulekileyo ebhishini
Ndiyakunomdla kwizografu. IPanama
UJonathan Acevedo uthi:
Sawubona ndingumcebisi kwaye ndiza kuba nomdla ukwazi ixabiso le-drone ndivela eMexico
jose ortiz uthi:
mva NdingumTopographer, ndingathanda ukungithumela isabelo-mali se drone kunye nezixhobo zayo ezipheleleyo (iikhamera kunye nesofthiwe ye-Topo-photogrammetric), ndilapha eVenezuela, I-Regards
UJuan Grover Antequera Flores uthi:
Unomdla kakhulu, ndingathanda ukuba nolwazi olungakumbi lwezobuchwephesha ngakumbi kwizicelo zasezidolophini zasezidolophini, kule meko ukuba kunokwenzeka ukuphumeza iteknoloji ye-LIDAR, kwaye ungithumelele iindleko zokufumana inkqubo epheleleyo.
Bigverto Arevalo Chuchuca uthi:
Ndiyakunomdla wokufumana izixhobo zokusebenza zezobugcisa kunye nokusebenzisa i-drones ndifuna ukwazi amaxabiso athiweyo izixhobo kunye ne-sofwares kule mi sebenzi. Ukuba kukho nayiphi na intlawulo yentlawulo
Ndiyakunomdla kwiidrones, nceda undithumele i-drone quote, isofthiwe, ukuqeqeshwa kweengcaphephe zophando nge-DRON. kunye nokuphathwa kwe-drone, inkqubo yokuhlawula kunye noqhagamshelwano
Iidrones zixhobo eziphakathi okanye ezincinci, ezilawulwa kude kwaye ngoko zithwele abasebenzi, ezi zixhobo ziphethe iikhompyutri eziphezulu, i-GPS, izixhobo zentsimbi kunye nokufunda ukulawula, namhlanje benza iindaba kuwo wonke umhlaba, ekubeni abantu abaninzi bayisebenzisa, phakathi kokusetyenziswa kwayo kunye neenzuzo esinalo: bayakwazi ukuchonga izinto kunye nabantu, bafune izixhobo okanye amabhomu baze baqhekeze umnxibelelwano ukuze bafumane ulwazi, basetyenziselwa yenza imephu echanekileyo ekufumaneni imifanekiso ethembekileyo kunye nokulungelelanisa, njl. Ngamafutshane ezi zixhobo zixhaphake kakhulu kwaye ngamnye umntu unikeza ukusetyenziswa okufanelekileyo ngokwemfuno yabo, kwaye ngenxa yokuba namhlanje baye baxhaphake kakhulu kwihlabathi.
jho freddy ramirez uthi:
Ngomso mva nceda ungithumelele iingcaphuno kule imeyili jhon.ramirez@cancilleria-gov.co
Raúl Villanueva Téllez uthi:
Sawubona! Ndingathanda isicatshulwa seedrones nge fotogrametriá.
Pavel Mariny uthi:
Sawubona, ndinomdla kwi-drone yepogragraphic, nceda unike izixhobo zokusebenza kunye namaxabiso, ndilapha e-Ecuador
juan donoso uthi:
Nceda uthumele iikowuteshini zeemodeli ezi-2 okanye ezi-3, oku kukwenza iifoto zedijithali zedijithali, ukuvavanywa kwezakhiwo njlnjl. Le yengcebiso yobunjineli eSantiago de Chile.
Miguel A. uthi:
Ngomso mva, nceda ndifuna ulwazi malunga nemifanekiso, amaxabiso, ixesha lokuhambisa, njl njl.
Elias Junior uthi:
Eyona ntsasa!, Iinkcukacha zezixhobo, iimpawu kunye neendleko zifunwa ngokufanelekileyo, ndinomdla wokuzifumana kodwa ndingathanda ukwazi ukuba zeziphi iziqinisekiso zabo, ukusebenza kunye nexesha lokulondoloza, kuba e-Lima peru kukho iinkampani kodwa Ingxaki yeziqinisekiso ezifanayo nenkxaso yobugcisa
Kwakhona ixesha lokunikezelwa kwezixhobo njengoko kuqeqesho lwenkqubo yonke. mbuliso
jose alfredo salazar ayerbe uthi:
Ukubulisa sinomdla kwi-software ye-drone + yezolimo, kufakwa eColombia,
Isiqendu se-drone ukwenza ulwabalazo lwam imeyile geotopohomero@gmail.com
Jose Legua uthi:
utywala uhlobo lwe-helix, bancomeka ukuba ndisebenzise i-topographic use. sibonga
JACINTO NAVÍO REYES uthi:
Iingqungquthela ze-Cordial, ndiyunjineli yoluntu kunye noPhando, Ndingathanda ukwazi ixabiso le-Drone kunye nesofthiwe kunye nexesha lokuhambisa elibekwe eColombia.
Norberto Rodriguez uthi:
Ndiyakunomdla wokwazi izixhobo zokusebenza, isofthiwe, uqeqesho, ixesha lokuhambisa, indlela yokuhlawula, Ndiya eColombia. Ngaba kukho ukumela kweli lizwe?
nelsys alvarado uthi:
Sawubona, kusasa, ndicela ulwazi olupheleleyo kwiidrones. Intengo yokuthengisa inikeza ipakethe epheleleyo kunye nolwazi olungakumbi malunga nenkampani yakho.
jorge solis uthi:
Ndicela ulwazi olupheleleyo nceda
UVanessa Guerra uthi:
Nceda uxabiso, ulwazi lwewaranti kunye noqeqesho.
IGERMAN ISCOBAR uthi:
Nceda uthumele umcaphulo: izixhobo, isofthiwe, uqeqesho
Izidingo: I-Topography, i-photogrammetry, ukubeka indawo ye-satellite, njl.
ULUCIO HILMER HUAMAN GARAMENDI uthi:
Ndingathanda ukuthenga enye yeerrones kwimisebenzi yezobugcisa njengoko ndiyithengayo, ndivela ePeru, kwaye ndisebenza kwiiphando zezobugcisa kunye neengqungquthela ze-hydrological, zendlela kunye ne-cadastre.
Ungangithumela isicatshulwa se-drone ephakathi
jesus vazquez sanchez uthi:
Ndingathanda ukwazi ixabiso leedrones neenkonzo
Ixabiso kunye noqeqesho lobugcisa kunye newaranti
candy sebastian candro uthi:
Molo kusasa ekuseni, ndilungiselela umsebenzi onxulumene nesi sihloko sigqwesileyo kunye nolwazi kwaye ndingathanda ukwazi ababhali bakho ukuba babancamathisele emsebenzini ...
Ndingathanda ukwazi iintlobo zeedrones kunye neendleko zazo, mbulela
Inomdla eBolivia ixubusha kwi-78422220
NdingumGrogoloji kwaye ndinomdla wokufumana i-geo-referenced mapping and mapping technology, ngoko ndikucela ukuba wazi ukuba iindleko ezipheleleyo zeyunithi yintoni kunye nokuba yeyiphi impawu zobugcisa. Ndiye eArgentina
sergio daniel henao uthi:
emva kwemini ndiya kuba nomdla kakhulu ekufumaneni umkhiqizo, nceda ndifuna ukwazi ixabiso le sixeko saseBotota, eColombia. bulela kakhulu
URUBEN DIAZ PEREZ uthi:
SIKHENZISWA UKUBA SIFUNYELE UKUFUNA KWENYE YAKHO IMALI, FUNA UKUFUNA IPRICE
IZINDAWO ZEZITHETHO ZI-DIEGO TORRICO uthi:
Andizi ukuba ufanele undithumele i-COST YONKE YONKE YENKCUBAMBA BOLIVIA KWI-DOLLARS
German Gomez uthi:
nceda uthumele ulwazi ukufaka isicelo kwiimodi kunye neendleko
Ndingathanda ukwazi ngesicatshulwa nokuqeqeshwa kweemveliso zabo + ukuthunyelwa eBolivia
alex andres mamani perez uthi:
Ndidinga ukwazi isicelo sendlela, ifoto ye-photogrammetric, umgangatho, ukugqagqana kweefoto, ikowuti ye-1 yezixhobo …… .nkosi. Atte. UAlex Mamani, uTopographer - uLa Paz Bolivia
Jose de Jesús Madera5 uthi:
Njalo iiyure iinguqu zenzululwazi zisinika iindlela ezifanelekileyo zobugcisa ukuququzelela umsebenzi kwaye le ngenye yezo ndlela, ngexesha lokuba sibone ukuba kufikeleleka kwezoqoqosho kwaye lubonelela ngeendleko kwi-pleador.
ivan garcia uthi:
bazi iindleko zokusebenza kunye neengcebiso
Ndiyabona mna NdinguJorge Ndingathanda ukufumana iphakheji epheleleyo ukwenza zonke iintlobo zophando kunye ne-drone ndivela e-Ecuador ngokukhawuleza ndibulela
Sawubona, ungathumela i-quote kunye neempawu zoqeqesho olupheleleyo lweenkqubo + zohlolo lwezobugcisa nge-DRON.
elio leon uthi:
Hayi, ndivela eBolivia ungandithumela isicatshulwa kunye neempawu zoqeqesho olupheleleyo lwe-system + yovavanyo lwe-topographic ne-DRON. Ndiyomdla kakhulu
Ixabiso lemveliso ndivela eChile, eViña del Mar.
I-Gerencio Inkampani Yobunjineli Bombutho e-Ecuador, ndifuna ukulawula ukuhamba kwenhlabathi ngedonari ngokuhamba ngokuzimela kunye nesicwangciso sendiza kunye neefoto ezifihliweyo, kunye neelona elincinci leekhilomitha ze-2, nceda ndithume i-quote,
Rojas CLEMENTE Valencia uthi:
Ndihlala Agustin Codazzi, Cesar iSebe Colombia, inkampani ukuhlola ukususela 1985, ukuba izikhululo zizonke, GPS-GRS-1 kunye GPS kunye RTK, angathanda ukuba sijolise inkampani yam irobhothi ukuphucula umgangatho womsebenzi yam ibe ngaphezu ngempumelelo. Ndingathanda sicatshulwa weqela lonke ufake kwi-ofisi yam.
Sawu, ndifuna ukwazi ixabiso lezinto kunye nokufumaneka kwabo, ndivela eArgentina. Ndiyabonga
Rosa Ayna Huarahuara de Leon uthi:
Ndiyathanda kakhulu ukufunda le ngcaciso kwaye ndifuna ukuthenga i-drone epheleleyo ine-consulting company. Nceda undithumele ulwazi olupheleleyo kunye noko ndimele ndenze ukuthenga.
laar castagne uthi:
nceda uthumele idilesi ukuze ufunde ulawulo lwe-drone kwiipopigraphies
URUBEN MARTINEZ uthi:
Sawubona, ndingu-geographer kwaye ndinomboniso wokudala i-arhente eya kuba noxanduva lokuhlola nokunikela lolu hlobo lweenkonzo kumasipala ohlukeneyo belizwe lam.
Ngaba ucinga ukuba kunokwenzeka ukuba uqale lo msebenzi kunye nezixhobo zakho?
Ngaba ungandinika ingcebiso malunga nalo?
Ingakanani imali endifanele ukuba ndiyithenge ukuthenga izixhobo ukuba oko kunokwenzeka?
Siyabonga kakhulu kwangaphambili kwaye ndikulindele impendulo yakho ngokukhawuleza
EUCLIDES FERNANDEZ VILLAORDUÑA uthi:
NDIFUNA UKUZIWA IZITHUBA ZI-PERU
A. Mhlophe uthi:
Ndiyakunomdla kwisixhobo, ukusetyenziswa kweengcaphephe zophando, ndiza kuqonda ukusixelela iindleko kunye nokuthunyelwa kwePeru.
Ngomso mva, ndinomdla wokufumana i-drone kunye ne-photogrammetry, ndiza kufuneka ndizazi iimpawu zobugcisa kunye namaxabiso.
Maykel J. Glez uthi:
Ndifuna ukwazi ixabiso lephakheji epheleleyo (Iqela leDrayone + Flight Flight + I-Professional Photogrammetric Software) Siyabonga.
Sawubona ndingathanda ukuba nolwazi malunga nale drone. Ndingathanda ukwazi iindleko, iimpawu zalo kunye nokuchaneka apho
Fernando Penagos S. uthi:
Ndiyinjini yoluntu kwaye ndinomdla ekufumaneni i-geo-referenced mapping and mapping technology, ngoko ndikucela ukuba wazi ukuba iindleko ezipheleleyo zeyunithi yintoni kunye nokuba yeyiphi impawu zobugcisa. Ndiya eColombia
Kulungile kusasa, ndiyinjini yombutho kwaye ndinomboniso wokudala i-agqwetha enoxanduva lokuhlola nokunikela olu hlobo lwenkonzo kumasipala ohlukeneyo belizwe lam
Germán Andrsde N. uthi:
Sawubona, ungandithumela isicatshulwa kunye neempawu
UNelson gomez uthi:
Ndiyathanda umdlalo weColombia
John Pérez uthi:
Mna, ndinguJohn Jairo Pérez kwaye ndingathanda ukucaphula kwiqela le-topodron leColombia
UCarlos Cervantes uthi:
Ndiya kuxabisa ukuba ungithumelela isicatshulwa kwikomiti yezolimo zePeru.
Ndingathanda ukwazi iindleko kunye neekhathalogu, isisombululo esipheleleyo nesilungeleyo somsebenzi wasemsebenzini, iziqinisekiso kunye neengcebiso zokuthengwa kwangaphambili kunye neposi, isofthiwe kwinkqubo yokuposa
UVictor Glez uthi:
Ndicela icatshulwa ekusebenziseni i-drones, amanani kunye neempawu zabo ukuqhuba uphando lwezolimo kuba ndifuna ukuwufezekisa umsebenzi wam.
Ndiyinjini yezobugcisa ehlathini ezinikezelwe ekubuyiselweni kweekheji. Ndingathanda ukwazi iindleko zezixhobo ezipheleleyo. Ndiyabonga
. cear chavez uthi:
kufuneka sizazi iindleko zokuphonononga i-drone
Sergio Villacañas uthi:
Ndiyakhathalela kakhulu indlela yakho yeTododron. NdingumNjineli wezandla zeHlathi kwaye ndinamava kwintsimi ye-computer (yolwazi). Ngaba uyayibona isebenza eSpeyin ukuba ikwazi ukuzimela ukuba yenze inkampani encinane ezinikele ekunikezeni iinkonzo eziphambili zezobugcisa (i-orthophotography kunye neendlela zedijithali zendawo) kwiinkampani ezinkulu zobunjineli kunye nokwakha?
Ingaba unganceda wandinike ulwazi olungakumbi malunga nexabiso, isofthiwe esisetyenzisiweyo kunye noqeqesho oluhamba kunye neTododron?
Siyabulela kusengaphambili kunye nokubingelela
Sawubona kusasa ekuseni ndingathanda ukwazi ixabiso leyunithi ukukhupha ixabiso lokuthenga ngokuzayo
Mario Cusiquispe Quispe uthi:
Ndingathanda ukwazi iziganeko, ubungakanani, izixhobo ezipheleleyo zezolimo kunye nezityalo, indleko, uhlobo lokuhlawula nokuthumela.
Ndiyabulela impendulo yakho.
UJULIO AUGUSTO SOUZA DEL AGUILA uthi:
NDICELA IKOTITSHU (INDLEKO) YEZIXHOBO ZOKUQHELEKA KWI-TOPOGRAPHY ……… ..
Marco Andrade uthi:
Ndingathanda ukwazi iindleko ze-drone ye-Ecuador, ndiyabulela kwangaphambili
ukuyeka ukuphonswa uthi:
Sinomdla kakhulu ekufumaneni izixhobo zakho, sifuna ukubona iindleko kunye neenkcukacha, isisombululo esipheleleyo kwaye silungele ukusebenza kwintsimi, kunye nesitishi sakho kwi-tirra ezo zinto ziya kuba nazo, iziqinisekiso kunye neengcebiso ngaphambi nangemva kokuthenga, siyabonga
A. SALAZAR uthi:
Ndiya kubulela ukuba ungathumela ulwazi olongezelelweyo malunga neendleko zezixhobo eziqwalasela izixhobo kunye nesofthiwe eyimfuneko yokuphanda i-paji, ukubala kwemilinganiselo, njl.
UJuan de Dios Vidal uthi:
Ndicela kubhajethi yezixhobo ezahlukeneyo abazenzayo kwaye ukuba usiqeqesha kwiiprogram ezisetyenzisiweyo.
Kulungile kusasa, ndingathanda ukwazi ukuba iqela lixabisa kangakanani ... siyabonga
UYOHANA VEGA uthi:
EZIQHELEKILEYO NGAPHAMBILI, NDAKHONA KWI-PHOTOGRAPHIC DRON, I-SERIAN SO AMABLO YOKUBA NDITHETHA I-QUOTATION. NOKUBA UTHANDA KUKHULU
Wenceslao Sandoval Felix uthi:
Nceda, ndifuna i-quron yeDrones.
Kuyathakazelisa kakhulu. iqela, kubalulekile ukwazi iindleko zezixhobo
UROSA IBAÑEZ NOLLA uthi:
Sawubona ndifuna ukwazi ixabiso endiyithandayo kakhulu kumveliso
Siyabonga kunye nokubhekiselele
Ndingathanda ukwazi ixabiso lezinto zokusebenza
NDICELA I-DRON I-CHOTATION FOR CHILE
HLANGISA a. uthi:
nceda ndifuna ukwazi ixabiso leedrones ... enkosi
Unomdla kakhulu, loo maqela asePeru? ukuba bangabathengisa kangakanani na ukuba babe nevidiyo kwi-youtube okanye into malunga nendlela esetyenziswa ngayo. nceda uthumele ulwazi olungakumbi kwi-imeyile, siyabonga
Miguel Escobar uthi:
Ndinomdla kakhulu… .Ndingathanda ukwazi indleko yezixhobo… .Ndihlala ePeru,
Ivan Cruz uthi:
Ndifuna ukwazi iindleko kunye neengcebiso zobuchwepheshe kwilizwe laseBolivia apho ndihlala khona
UJose Arias uthi:
Ukubulisa ndifuna ukwazi ixabiso lezinto zokusebenza
UFlavio Eduardo Pérez Ochoa uthi:
Ndiyakhathalela ukuba zeziphi izixhobo eziye zenzelwe uphando lwezolimo, iimilinganiselo zeparadesi yezakhiwo zasemaphandleni ngenjongo yezolimo kunye neefoto zentambo, ukubaluleka kwezixhobo ezipheleleyo zalo msebenzi kwaye ukuba zithunyelwa kunoma iyiphi inxalenye yaseColombia.
Siyabonga, silindele impendulo yakho yokukhawuleza.
UAlejandro Rodriguez uthi:
Ndiyabulela ngolwazi oluninzi malunga namanqaku ahlukeneyo kunye namanani eedrones. Ngendlela efanayo, ukuba bayathumela iColombia kunye nexabiso layo. Ndiyabonga
Mna ndivela eChile Ndiyomdla, ndifuna ukwazi ixabiso leedronographi
UCarlos carvajal uthi:
Sawubona, kusasa ekuseni, ndizinikezele kwi-dipography kwaye ndifuna ukwazi ukuba yeyiphi uhlobo lomdlalo othengiswa ngawo, iimodeli kunye namanani onokuthumela ngayo izibhengezo nceda kule post zibulele kakhulu
Sawubona, kusasa ekuseni, ndizinikezele kwi-dipography kwaye ndifuna ukwazi ukuba zeziphi izipho onokuzithengisa, iimodeli kunye namanani onokundithumela ngazo izikhombisi nceda kule imeyile ngibonga kakhulu
URobin Enriquez uthi:
Sawubona, mnumzana. Ndingathanda ukwazi iimpawu zedronsi yezobugcisa eziquka intengo yabo. yam imeyile rc_ocampos@hotmail.com
Rommel Loachamin uthi:
Nceda ndifuna ulwazi oluninzi malunga neentlobo zeedrones kwi-Topography kunye neendleko.
UNelly Saldarraiaga uthi:
Ndifuna ulwazi olungakumbi malunga neentlobo zeedrones kunye neendleko zabo zokupasa nokusetyenziswa kwemephu
Ndicela ulwazi oluninzi malunga neentlobo zeedrones kunye neendleko zabo kwisicelo esithile sopoppographic and mapping
kuphelisa iindonga uthi:
Mhlekazi, Ndazibona iividiyo kwaye zingandicela ukuba ndifumane ikowuti, idrone kunye nesoftware, uqeqesho ekusetyenzisweni kwayo. Ndihlala kwisebe laseLima, kwiPhondo laseBarranca - ePeru, ke ndiya kuba nombulelo ukuba ungandithumelela ixabiso lesicatshulwa ngazo zonke iindleko
Yuri Atanacio uthi:
Nceda undithumele ulwazi olongezelelweyo kwiinkcitho, isofthiwe, uqeqesho kunye nezixhobo. Ndivela eLima Peru
ursula yokuziphatha uthi:
Bazalwana abathandekayo ndibukele iividiyo kwaye ndingathanda ukufumana i-quote, i-drone kunye nesofthiwe kunye nokuqeqeshwa kolawulo lwayo. Ndifumaneka eLima Peru, kwisithili saseAte, ngoko ndiyakuyixabisa ukuba ungangithumela isantya esilinganiswe kuyo nayiphi na indleko ebekwe kwiofisi yam.
molo ndiyifumene inomdla, ndifuna ulwazi kunye nesicatshulwa sedrone yophando ... enkosi
Ndiyakuthanda ukwazi amaxabiso okufumana inkqubo ye-topodron, ndizinikele kwingcebiso kwiiprojekthi zemizi-mveliso ndivela ePeru
Víctor Ortega Morales uthi:
Sawubona ndilapha eChile kwaye ndinomdla wokufumana inkqubo ye-topodron, banokundithumela ulwazi malunga nenkqubo kunye neendleko kwi-pesos yaseChile.
Ukubulisa kunye nemibulelo emininzi.
Ndingathanda ukwazi ixabiso leedronsi kwizicelo zobunjineli zobunjineli
UCarlos Alberto Rosas uthi:
Ndingathanda ukwazi indleko yedrone kunye neendleko zoqeqesho ngokusingathwa kwayo, ndiseBarrancabermeja, eSantander, eColombia ... enkosi
Alejandro Badillo uthi:
Ndingathanda ukwazi ukuba ziphi izixhobo ababenayo kunye nokuba zibiza kangakanani i-Bogota Colombia Ndine-drones ye-philamacion dji phantom Ndingathanda ukwazi ukuba ezi zinokuthi zinikwe amandla kule mimandla yemisebenzi ngokuthenga isiteshini kunye nenkqubo
Ndiya kukuxabisa ukuba undixelele ngeendleko zokuhlola i-Drone.
Ndiyakunomdla, ukuyifaka kwinkqubo yam yokulinganisa.
NAPOLEON IPHEPHA LOKWENZA uthi:
NDIFUNDA IINKCUKACHA ZOKUPHILA KWEENKQUBO D NEZINTLOKO NEZINTLOKO ZEZIKHOKELO
diana sofia blackburn uthi:
Ndiya kuba nomdla ukwazi amaxabiso okufumana inkqubo ye-topodron, ndinenkampani e-Cali-Colombia ezinikezele kwiingcebiso kwi -pographic.
Franco Montero uthi:
Mthandi, ndinomdla wokufumana izixhobo zokusebenza zezobugcisa kunye nokusetyenziswa kweedrones Ndifuna ukwazi amaxabiso athiweyo izixhobo kunye nazo zonke eziyimfuneko kunye kunye neengxaki zokusebenzela le mi sebenzi.
Hayi, ndivela ePeru. Ndiyakuthanda ukuthenga isiqwenga sezixhobo ezinjengeli (topodron) ukuhlola uphando, iimpawu zezixhobo kunye nexabiso.
Ufezekile, sele usenayo apho, ndihlala usele.
Ndiqhagamshelane kwiwebhusayithi yam, iinkonzo zenkcazelo yezobugcisa kunye nokuhlola okuhlukahlukeneyo kunye ne-OS Ndingakwazi ukudibanisa nabo, i-OS Ndinokunika uluvo lwam kwaye ndagqiba. Kukho kwiwebhu unayo yonke ingcaciso yam, uDktone Ispan STA
Ukusuka kwi-ATyges, abavelisi benkqubo yeTopodron, sifuna ukubulela umdla oboniswe ngabafundi beGeofumadas. Inkqubo yethu yaseYurophu sele isebenza kumazwe aliqela ase Mzantsi Melika anje nge Peru, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, ...
Ukuba ufuna ulwazi oluthe ngqo malunga nenkqubo, ungaqhagamshelana nathi: uav@atyges.es, kwifowuni ye-0034952020600 okanye nge-akhawunti ye-skype: i-atyges
Qhagamshelana ne-Atyges website.
Buza malunga noFederico.
Ndinezinye zazo, ngo-Oktoba.
Sawu, ndivela ePeru, eCusco. Ndifuna ukuthenga iibhondi zeedrones ukuze ndihlolisise umsebenzi ondifuna ukungazi ngakumbi, ngokukhawuleza,
Umhlobo onobubele ndilapha ePeru kwaye ndifuna ulwazi lweqela elikhankanywe ngasentla, ixabiso kunye nexesha lokuhambisa nayiphi na inkcazelo ethunyelwe kwi-imeyile yam.
Peter Tapken uthi:
Sawubona, ungene http://www.geo-matching.com Sinikeza isicatshulwa esicwangcisiweyo sesisombululo somoya. Apha ungaqhathanisa iimveliso kwaye ufunde amazwana. Kunconywa kakhulu!
Alfredo Navarro uthi:
Ndiyakuthanda ukwazi ixabiso lemveliso ngokuziswa kwiRiphabhliki yaseDominican
UDavid Nelson Sanchez F uthi:
Ndiyakunomdla wokwazi ixabiso lemveliso ngokunikezelwa eBolivia okanye eParaguay.
Norberto Alfaro C. uthi:
Nceda undithumele iindleko, uqeqesho kunye nexesha lokuthumela kwiprogram ye-topodron. Ndihlala eSantiago, eChile
Miguel A. Montero uthi:
Mva ntambama, ndinomdla wokufumana i-drone yokwenza imobo yendawo, ndiza kufuneka ndizazi iimpawu zobugcisa kunye namaxabiso.
Sawubona, ndiyakuxabisa ukuba ungandithumela iindleko zezixhobo, kuba andinakuzifumana.
Usibhala kwilizwe lini?
UDavid Ortiz uthi:
Mva ntambama, ndingumrhwebi wangasese kwaye ndinomboniso wokudala i-arhente enoxanduva lokuhlola nokunikela olu hlobo lweenkonzo kumasipala ohlukeneyo belizwe lam
siceba ucwaningo lwezobugcisa lwe-25 000 Ngaba lusempumalanga yelizwe, kunye neengcingo ze-1 ze-equidist, kunye nenkqubo yezobugcisa, ingenziwa na? ngeliphi ixesha?
Ingakanani inkqubo epheleleyo?
Sinqwenela ukusithumela iinkcukacha zeenkcukacha kunye neendleko, kunye nokuqeqesha abasebenzi bethu
. UJorge solis
I-Solis Topography kunye ne-Geodesy yobunjineli be-Eirl Engineering
Manuel Arroyo Caceres uthi:
Ndiyakunomdla wokufumana izixhobo zokusebenza zobugcisa kunye nokusebenzisa i-drones Ndifuna ukwazi iindleko zomntu ngamnye kuzo zonke izixhobo eziyimfuneko kunye ne-sofwares kule mi sebenzi.
Ixesha lokuhanjiswa kwezixhobo kunye noqeqesho lwenkqubo yonke iya kuba nendawo yokuthengisa eLima - ePeru
UVictor Hugo Garcua Siancas uthi:
Molo emva kwemini ndingathanda ukwazi ukuba zingakanani iindleko zezixhobo… enkosi
IIMISEBENZI ZOKUBHALA uthi:
Ndingathanda ukuthenga enye yeerrones kwimisebenzi yezobugcisa njengoko ndiyithengayo, ndivela ePeru, kwaye ndisebenza kwiingcaphephe zophando kunye nezifundo ze-hydrological
kengi nakamura uthi:
Mna, ndinombuzo kunye nesofthiwe, uthetha ntoni nge-omega phi kunye ne-kaapa?
Siqala ukuqhelanisa nale software kwaye asiyiqondi le ngongoma
Ndiyathemba ukuba unokunceda
Izandla zegolide zeGoogle